Qaxootiga Soomaalida ee Yemen lagu duqeeyey oo dawladda Sucuudigu dalbatey in la baaro. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Qaxootiga Soomaalida ee Yemen lagu duqeeyey oo dawladda Sucuudigu dalbatey in la...
Qaxootiga Soomaalida ee Yemen lagu duqeeyey oo dawladda Sucuudigu dalbatey in la baaro.
War qoraal ah oo kasoo baxay isbaheysiga ayaa lagu sheegay in dilka dadkaasi ay tahay wax laga xumaado ,islamarkaana eedeynta ugu badan loo soo jeediyay Isbaheysiga Sacuudiga ayna QM ka dalbadanayaan in ay baarayaal u dirto goobta ay wax ka dhaceyn.
“Waxaan ka warqabnaa in weerarkaasi ay fulisay diyaarad helicopter ah, islamarkaana eedeyn loo soo jeediyay Isbaheysiga marka waxaana QM ka codsaneynaa in ay baarto” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Isbaheysiga.
Marka la eego guud ahaan warbaahinta caalamka oo dhacadan si gaar ah uga hadashay waxaa ay ku eedeynayaan in ay ka danbeeyeen isbaheysiga uu hogaamiyo Sacuudiga.
Previous articleMeydad Hor leh oo laga heley xeebaha Dalka Yemen kuwaasoo badda ku daatey markii duqeynta diyaaraduhu u geysteen.
Next articleDawladda Federalka Soomaaliya oo Puntland ugu baaqdey in xukuumad wax ku ool ah lasoo dhiso.